ချစ်သူရည်းစားလေးရှာရင်း ၀င်ငွေရအောင်လုပ်နည်းလေးပါ! - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Posted by Ko Nge on February 16, 2013 at 5:51pm in Others
ဘုရားဖူးရင်းလိပ်ဥပါတူးလို့ရတဲ့နည်းတွေပါ....တခြားပေါက်ကရာမတွေးပါနှင့်သာမန်အွန်လိုင်းတွေမှာလို ရိုးသားစွာ သင်ငွေရှာတဲ့နည်းလေးတွေပါ၊ သူကထူးခြားတာက ၀ါဿနာရင် သင်တို့လဲဝင်ရှာလို့ရတာပါ၊
အမိမြန်မာပြည်မှာတော့ အခုလို Dating link share တွေသိတဲ့လူတွေ နည်းပါသေးတယ်! စီပွားရေးတခုလို လုပ်လို့ရတာကို မမြင်ကျသေးပါဘူးလို့ပြောရင်းနှင့်အားလုံးသိကျတာက အောင်သွယ်တော်လူပွဲစားအနေနှင့်ဘဲသိကျပါ သေးတယ်၊
ဒီလိုလူပွဲစားတွေကလဲ တရုတ်လူမျိုး နှင့် ကုလားတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်၊ ဗမာတွေမှာ သိပ်မတွေ့ရပါဘူး၊
ဒါကအခုခေတ်မှမဟုတ်ပါဘူး ရှေးနှစ် ပေါင်း များစွာကတည်းကရှိကျတာပါ လေ၊ ဒီအောင်သွယ်တော်မှမဟုတ်ပါ ဘူး လူလောကသဘာဝက ဖန်တီးပေး ထားတဲ့ ဂီလေသသနာတွေကို ဘယ် လိုလူတွေ၊ဘယ်တိရစ္ဆာန်တွေကမှ မ ရှောင်နိုင်ကျပါဘူး! လိုက်စား တာနှင့် သွေးအေးတာ ဘဲရှိပါတယ်၊
ဖိုမပူးကပ်တတ်တဲ့ သဘာဝကိုး! ဆိုလို တာက ပြည်တန်ဆာဆိုတဲ့ ကြေးစား အဆင့်ထိတောင် သူစည်းကမ်း နှင့်သူ ဥပဒေဘောင်နှင့်တရားဝင်လုပ်ခွင့်ပေးထားရင် ဘာမှပြဿနာတွေသိပ်မရှိနိုင်ပါဘူး၊
ကျွှန်တော်တို့ရွှေတိုင်းပြည် မှကတော့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့မှုဝါဒတွေနှင့် အကုန်လုံးပိတ်ပင်ထား ကျတော့ တရားမ၀င်လုပ်စားတဲ့ ပိုင်ရာဆိုင်ရာအလုပ်တွေဖြစ်နေရပါတယ်၊ (ဟိုးရှေး ပုဂံခေတ်က ဗမာပြည် နှင့် နိုင်ငံတကာတိုင်းမှာ တရားဝင်လုပ်ခွင့်ပေးထားတာရှိပါတယ်)
အခုဆို လူတိုင်း ချဲဒိုင်တွေဘောလုံးပွဲ လောင်းကစား သမားတွေ မှိုခိုပေါက် နေကျပြီး ဒါကိုနိုင်ငံတော်က တရားဝင် လုပ်လိမ့်နိုင်ရင် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဏာန်ငွေ တွေ အမြှောက်အများတွေ ရလာမှာ ဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထု တွေကို ဥပဒေနှင့် ထိမ်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်၊ အခုတောင် နိုင်ငံတကာဘော်လုံးပွဲ တွေကို ဒေါ်လာဘီလံနာနှင့် ပေးပြီး ပြသခွင့်လိုင်ကိုယူနေကျပြီး အမိနိုင်ငံ ကဒေါ်လာတွေ ပြင်ပကိုနည်းပေါင်းစုံ ရောက်နေ ကျတာကို ရင်နာစွာတွေ့နေရပါတယ်၊
ဒါပေမဲ့ ဒါတွေကိုနိုင်ငံခြားမှာက သူစည်မျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့် ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှာဘဲ တရားဝင် လုပ်နေကျပြီး လူတွေကို အောင်သွယ် ပေးကျတာပါ လူလွတ်တွေ၊လူပျိုအပျိုတွေ ၊အိမ်ထောင်ကွဲတွေ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်၊ စိတ်ဝင်စားရင်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါအုံး! ရွှေတွေတချို့ကို အသင်းဝင်တွေမှာတွေ့နေရပြီဆိုတော့ Dating Link တွေမှာတော့ မြန်မာဆိုတာရပြီပေါ့၊
မစွန်သေးတဲ့ အသိထဲက အပျိုကြီးတွေ အတွက်လဲပါပါတယ်၊ ကြိုးစားပြီးရှာကြည့်လိုက်ပါအုံးလို့! နိုင်ငံခြား သားဆိုပြီးတော့ သိပ်လဲမထင်မကြီးကျပါနှင့် အားလုံးကအလုပ်သမားတွေများပါတယ်လို့ပြောရင်းနှင့် အလိမ်အညာ တွေတော့ကြည့်ရှောင်ကျပေါ့နော်... Who'd be need to Dating!+++++
ပုံမှန် သင်းပြည့်အသင်းဝင်ကတော့ လစဉ်ကြေးကောက်ပြီး Application တွေအပြည့်အစုံ ပေးထား ပါတယ်၊ ဖရီးကတော့ကြည့်လို့ဘဲရပြီး ဘာမှရ ကျမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရင်းနှင့်....
ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာခေတ်စားနေလဲဆိုတော့ လူနေမှုစရိတ်တွေကြီးတော့ အိမ်ထောင်မပြုရဲကျဘဲ လူလွတ်တွေ၊လူပျိုအပျိုတွေ၊ အိမ်ထောင်ကွဲတွေများကျတော့ ဒီစီးပွားရေးတွေနိုင်ငံတကာမှာအောင်မြင်လူကြိက်များ နေ ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတခုပါဘဲပေါ့နော်!
အခုလို Dating Link လေးတွေလဲ နိုင်ငံစုံက Application လေးတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်၊တချို့မြန်မာဝတ်လ်ဆိုဒ်တွေမှာလဲတွေ့ရှိနေပါပြီလေ...
ဒါက်ဖေ့လ်ဘွက်တွေမှာတွေ့တဲ့ Dating link လေးတွေပါ...
See Pics of Singles, Free
View photos of single women on Match.com™ Singapore for Free!
Meet Single Foreign Women
Meet single expat women looking for dating and chat. Join Singapore...
Singapore Dating Secrets
Students paid thousands of dollars for what you're about to see for...
အဲဒီမှာ သင်ငွေရှာချင်တဲ့ Afflilate ကတော့ သူ http://sg.match.com က၀တ်လ်ဆိုဒ် Join Commission Junction နှင့် Join LinkShare ဆိုပြီး ၂ခုပေးထားပါတယ်၊ အဲ! မြန်မာပြည်ကိုတော့ ပေးထားတာမတွေ့လို့ အမိမြေကနေ သင်တို့ဘာမှသင်လိပ်ဥတူးချင်လို့မရပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်! ဘုရားဘဲဖူးလို့ရပါမယ်လေ! ကျွှန်တော်လဲအခုမှာစမ်းသပ်နေတုန်းပါဘဲ!
သင်ကိုဝင်ငွေရှာပေးမဲ့ အွန်လိုင်းက Dating ဆိုတဲ့ အောင်သွယ်တော် affil...<Link
Partner With Match.comaPioneer and Worldwide Leader In the Online Dating Industry
Join Commission Junction
Match.com has led to more dates, more relationships and more marriages than any other site.
Industry founder and leader
Earn Up To $101.94 Per Subscriber*
Earn up to 25% bonuses!
Industry leading payout
Promotional discounts and free trial offers
Interactive search boxes
Work directly with our expert marketing team
Team commitment to help you grow
Customized offers fit the needs of your site
Welcome to the Match.com sign-up area.
Earn 75% of all new subscription revenue PLUS an additional 25% bonus opportunity foratotal of up to 100% commission with the world's largest online dating site. Match.com is the leading online dating resource for singles and one of the most successful affiliate programs in the industry. Give your customers access to the largest database of online personals and generate commission with every Match.com paid subscription. Join today!! Earn Tomorrow!
We have teamed up with Commission Junction to provide our publishers with trusted third-party tracking, real-time reporting, and monthly commission checks. If you are alreadyaCommission Junction Publisher, you can skip the form and sign up for the Match.com Program directly through the Commission Junction Member's Area
More information about Match.com
↑Note: Your functional currency settings will establish the currency used to calculate and display all financial content in this account. All functional currency settings are permanent and may not be reversed or changed once
Signing up asaLinkShare publisher is quick, easy, and free!
Just complete the info on this page and you'll be up and running in no time.
Business Name: (Your name if none)
I am exempt from backup withholding. LinkShare is legally required to collect W-8/W-9 tax information in order to process and issue your commission payments. Please verify that the information below is accurate.
Social Security Number: Required by U.S. tax laws to collect this information for tax purposes.
e.g. 12345 or 12345-6789
Emails will be sent to you in your preferred language wherever possible. Please note, however, that some advertisers may not have emails available in all languages, therefore there is no guarantee that every email you receive will be written in your preferred language.
Membership Agreement (US & CAN)
Membership Agreement (UK)
Membership Agreement (Australia)
Membership Agreement (EU)
Type the characters that appear in the image above
Credit@ Feb16,13 & 17:30
Tags: စီးပွားရေး၊ငွေကြေး၊နည်းပညာ Share Twitter
manawphyulay leftacomment for Aung Kyaw Htinyesterdaymanawphyulay leftacomment for Ko Chityesterdaymanawphyulay and ugly devil are now friendsyesterdaydevillove replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျWednesdaypeepaw replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျTuesdayNga_Pyort replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျMondayLIquid@crystal replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျNov 29pyiphyomgmgsoe updated their profileNov 26pyiphyomgmgsoe leftacomment for thinnNov 26pyiphyomgmgsoe replied to pyiphyomgmgsoe's discussion Free SIP for Testing ! ! !Nov 26pyiphyomgmgsoe replied to Aung Myo Htet's discussion About CiscoNov 26Bijamon liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Nov 25 More... RSS